Roberto Carlos oo soo xushay kooxdiisa Riyada Champions League… oo ay calanka u sidaan Ronaldinho, Maldini, Makelele (iyo Isaga laftiisu !)
HomeChampions LeagueRoberto Carlos oo soo xushay kooxdiisa Riyada Champions League… oo ay calanka u sidaan Ronaldinho, Maldini, Makelele (iyo Isaga laftiisu !)
Ma jiraan xidigo tiro badan oo khibrad sare u leh guusha horyaalka Champions League, kuwaas oo la heer ah laacibkii hore ee naadiga Real Madrid difaaca uga ciyaari jiray ee Roberto Carlos.
Halyeyga reer Brazil, wuxuu kula guuleystay tartankan saddex jeer , shan xili ciyaareed oo uu u safanayay kooxda Los Blancos, isagoo koobkan caanka ah hinjiyey ama kor u qaaday sanadihii 1998, 2000 iyo 2002.
Halkan, Carlos wuxuu dib ugu soo xasuustay oo u soo qaadanayaa ciyaaryahanadii qaaliga ahaa ee uu ka soo garab ciyaaray, qaarkoodna uu ka hor yimid, isagoo sharaxaya sababta uu ugu xushay inay kamid noqdaan kooxdiisa riyada ee Champions League.
Mid kamid ah goolwadayaasha ugu taariikhda weyn kubada cagta, Koobabka uu la qaaday kooxda Madrid waa kuwo aan tiro lahayn oo cajiib ah. In goolwade caalami ah lagu noqdo adigoo 19 jir ah oo lagu ciyaaro Champions League waa xaalad aan riyaaqeeda cidina qiyaasi karin.
Inaanu xulka Brazil mudo dheer ka soo wada mid ahayn, iyo anigoo filaya inuu yahay xidigii ugu fiicnaa difaaca baasha midig intii aan anigu aqaanay iyo waliba abid kubada cagta. Waana mid kamid ah shantii ciyaaryahan ee ugu fiicnaa ee Abid Soo mara Brazil.
Inaan ka soo horjeesto anoo Real Ah iyo Anigoo Brazil u ciyaaraya labadaba , waa ciyaaryahan cidhiidhi kugu abuuri karaya mar walba oo difaac culus ku saaraya. Waana difaaca aad u baahan tahay adaygiisa inuu kaa garab safto.
Wax kasta oo ay sameeyaan ciyaaryahanada difaaca ka ciyaara ee ku guuleysta xidiga aduunku. Xaqiiqdii Fabio waa shaqsi sameeyey, kuna tusi kara wax kasta oo aad uga baahato inuu qaban karo.
Aniga laftayda ayaa is xulanaya; Ciyaaryahanada weerarka ka ciyaara waxay u baahan yahiin cid kula gorgortanta laagida kubadaha xorta ah (Free Kicks).
Kuma guulaysan kartid Champions League saddex jeer adoo saddex naadi u kala ciyaarayam haddii aadan ahayn ciyaaryahan khaas ah, laakiin waxa kale ee aanay dad badani ku aqooni waa inuu yahay hogaamiye heer sarre ah. Had iyo jeer wuxuu diyaar u yahay inuu wax kuu kordhiyo kulana taliyo. Ciyaaryahan Qaali ah iyo shaqsi Qaali ah.
Inay ciyaaryahanadu ka garab ciyaaraan Makelele waxay ku keentaa inay dareemaan Ammaan iyo degenaan, haddii khalad kaa dhaco, isla markaaba isaga ayaad arkaysaa oo saxaya tirtirayana. Runtii aad baanu ugu darsanay ama ugu xiisnay markii uu naga tagay ee ku biiray Chelsea.
Mid kamid ah xidigii ugu cuslaa ee dunida soo maray, Waxa uu Zizou kubada ka dhex sameeyey waa wax waligeed la xasuusnaan doono. Sharaf bay ii tahay baan odhan karaa inaan ka soo barbar ciyaaray.
Lugo mucjiso ah, aan ahayn farsamo iyo iska yeel yeel – wuxuu abuuray oo dhaliyey goolal la heer ah ama ay isu dhigmaan awoodiisa ciyaareed.
Wuxuu ahaa laacib qaali ah; wuxuu igu kalifi jiray inuu i xiijiyo oo nafta iga saaro markii uu Barcelona ahaa ee aanu iska hor nimaadno. Markii uu ku soo biiray Real Madrid ayaan nafis dareemay, intaa wixii ka dambeeyeyna wuxuu igu dhibi jiray oo ii bilowday inaan tababarka ku xiiqo oo ku rafaado.
Shaqsi la dhashay gool dhalinta, iyo hanaanka gool loo keeno, dhamaan isagaa dhalin karayay goolasha oo dhan. Saaxiib weyn iyo weeraryahankii ugu dhamayska tirnaa ee aan waligay arko.
Wolves vs Bolton Wanderers 5-1 & All Goals And Highlights & Championship
Cajiib: Maxaa Ka Dhexeeya Madaxweynihii Somaliya ee Aadan Cadde Iyo Cristiano Ronaldo?
Warbixin :- Faa’iidada Somaliland Ka Heshay Tartankii Conifa 2016 Ee Abkhazia